गायक युवराज चौलागाईको ` लभ्ली पाराको ´ गीत छिट्टै सार्वजनिक हुँदै | Chitrawan Khabar
गायक युवराज चौलागाईको ` लभ्ली पाराको ´ गीत छिट्टै सार्वजनिक हुँदै
निराज रानाभाट , काठमाडौं : चर्चित लोक दोहोरी गायक युवराज चौलागाईको नयाँ लोक दोहोरी गीतको म्युजिक भिडियो छिट्टै सार्वजनिक हुने भएको छ ।
इन्द्रेणी कार्यक्रमको नयाँ स्टुडियोमा म्युजिक भिडियो छायाङकन गरिएको छ । गीतको शव्द तथा रचना युवराज चौलागाई आफैको रहेको छ भने गीतमा स्वर युवराज चौलागाई र रिना के.सी. ले दिएका छन् । चर्चित नयाँ प्रतिभावान गायिका के.सी. ले भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन् । यता सामुहिक नृत्यमा सम्प्रिया खड्का , प्रकाश शर्माको नेतृत्वमा जोसेफ विद्यालयका कलाकारहरुको प्रस्तुती गरेका छन् ।
इन्द्रेणीको स्टुडियो भित्र र बाहिर निकै नयाँ तरिकारले अधिकतम प्रविधिको प्रयोग गरि छायाङकन गरिएको निर्देशक उधिराम खड्काले बताएका छन । अन्य सहयोगी कलाकार तथा गायक गायिकाहरुमा इन्द्रेणी कार्यक्रममा कलाकारहरुले साथ दिएका छन् । गीतको छायाङकनमा सिने मेट्रोग्राभर मिराज अर्यालले गरेका छन भने प्राविधिक संयोजनमा दिपक घिमिरेले गरेका छन ।
आधा दर्जन भन्दा बढि लोक दोहोरी गीतको एल्बम समेत निकाली सकेका चौलागाईको हालै आएको काठमाडौं सुकेधाराको ` लभ्ली पाराको ´ बोलको गीत छिट्टै इन्द्रेणी युटुव च्यानलबाट सार्वजनिक हुने भएको छ ।
गीतले मुख्य रुपमा युवायुवतीबीच एक अर्कालाई मन पाराएको विषयलाई समेटिएको छ । लोक दोहोरी गीतमा युवा अवस्थाका युवायुवती बीचको चीनजान मायाप्रेम हुदैँ एक सफल जोडीमा परिर्णत भएको विषयवस्तुलाई गीत संगीतको माध्यम मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ ।
छायाङकनै दोरानमा सयौ पाका पुस्ताहरुले समेत निकै चाखका साथ अन्तिमसम्म साथ र सहयोग दिएका थिए । इन्द्रेणीको स्टुडियोमा आएका दर्शकहरुले समेत छायाङनको समयमा भएका गतिविधिहरुलाई निकै रोचकताका साथ हेर्नुका साथै छमछमी नाचेका देख्न सकिन्छ ।
छायाङनको क्रममा इन्द्रेणी फाउण्डेशनका अध्यक्ष तथा इन्द्रेणी कार्यक्रममा सञ्चालक कृष्ण कंडेल , व्यवस्थापक प्रतिमा कंडेल लगायतका वरिष्ठ कलाकारहरुले साथ दिएका छन् । समसामयिक विषयवस्तु र युवायुवतीहरुमा लक्षित यो लोक दोहोरी गीतले साचिकै आम युवा पुस्तादेखि पाकापुस्तासम्मलाई समेटेको भन्दै स्थानीय लोक कला मौलिकतालाई समेटेको भन्दै अध्यक्ष कंडेलले गीतको निकै प्रशांसा गरेका छन ।
गीतको छायाङकनमा गायक छत्र शाहीले समेत अभिनय गरेका छन । इन्द्रेणीका सम्पूर्ण टिमको विभिन्न अभिनयमा साथ दिएका छन् ।
गीतको भिडियोमा मिडिया पाटनरकाे रूपमा `चित्रवन खबर ´ लगायतका अन्य विभिन्न अनलाइन मिडिया रहेका छन ।
दोहोरीमा छाडा शब्द मिसाउने १३ जना कलाकारले मागे माफी